Ahmed Silanyo Iyo Marwadiisa Amina Sheikh Mohamed Oo Xaflad Sagootina Loogu Sameeyay North London | Somaliland.Org
Ahmed Silanyo Iyo Marwadiisa Amina Sheikh Mohamed Oo Xaflad Sagootina Loogu Sameeyay North London
June 30, 2009	Habeennimada 26 Juun 2009 ayaa Gudoomiyaha Xisbiga Kulmiye Ahmed Silanyo iyo Marwadiisa Amina Weis loogu sameeyay xaflad sagootin ah, oo lagu qabtey Waqooyiga London xafladaasi oo si sharaf leh loo soo agaasimey oo ay ay soo qabanqaabiyeen laanta haweenka iyo reer KULMIYE ee Waqooyiga London.
Xafladaas oo haweenka reer KULMIYE si gaar ah ugu sagootinayeen Marwada Gudoomiyaha Xisbiga Kulmiye, Amina Weis iyo gudoomiyaha Xisbiga Ahmed Silanyo aya waxa ka soo qaybgaley xubno muhiim ah oo ka kala socoda dhamaan laamaha London ee KULIMIYE.
Xafladaas waxa khudbado soo dhaweyn ah ka jeediyey xubno ka so socda barga, bariga fog iyo waqooyiga London. Waxa kala oo khudbad aad loogu bogey ka jeedisey Xildhibaan Ikraan Xaaji Daauud oo xubin reer Kulmiye ah kana mid ah xildhibaanada KULMIYE ee Golaha Wakiilada.
Ugu dambeyntii waxa halka ka hadashey Marwo Amino Weris oo ku gubaabisey reer KULMIYE u diyaargarowga doorashada 27 September 2009 iyo hanashada hogaanka. Khudbadaas oo reer KULMIYE sacab ku soo dhaweeyeen dalka
Waxa ku lifaaqan sawirada qaar ka mid ah sawiradii xaflada.
Gudoomiyaha Xisbiga Kulmiye Ahmed Silanyo, iyo marwadiisa Amina Weris Sh Mohamed ayaa maalinta bari ah u safraya dalkii hooyo, iyaga oo mudo lix week ah dalka dibada uga maqnaa, safarana ku marayay qaar kamid ah wadamada Europe . Halkaas oo ay kula kulmeen masuuliyiin ka tirsan wadamadii ay booqdeen iyo Jaaliyadaha Somaliland ee wadamaaas ku nool.